Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Jabhad kenya hubeysay ay weerar ku qaaday Beled Xaawo – Xorriya Online
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Jabhad kenya hubeysay ay weerar ku qaaday Beled Xaawo
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in jabhad fallaago ah isla markaana dowladda kenya ay hubeysay ay u soo tallowday xuduudka Soomaaliya ayna weerar ku qaaday gobalka Gedo gaar ahaan Beled Xaawo.
War-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkaas oo ay ku tilmaantay dowladdu mid sharci darro ah .
Warka ka soo baxay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe ayaa lagu yiri.
“Jabhad ay soo hubeysay Kenya ayaa soo weeraray ciidanka Soomaaliya ee ku sugan Beledxaawo, kuwaas oo weerarka iska caabiyey,” sida qoraalka lagu sheegay.
“Dowlada Federaalka Soomaaliya waxay cadaynaysaa in Jabhaddii fallaagada ahayd ee ay soo hubaysay Dowladda Kenya oo caawa u soo tallowday xuduudda Soomaaliya ay weerar ak geysteen Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Beled Xaawo. Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo leh ugu jilib dhigay duulaankaas sharci-darada ah ee shisheeyuhu soo abaabulay,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Waxaan si adag u cambaaraynaynaa duulaankaas gardarada ah ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya kaas oo qilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta Gobolka iyo xeerarka caalamiga ah ee ku dhisan is xaq-dhawrka iyo ilaalinta madaxbaanaanida qaranimo.” ayaa lagu yiri qoraalka.
Jawaabta culus ee xalay ka timid dowladda federaalka iyo weerarka Cabdirashiid Janan ayaa kasii dari doona xiisadda ka dhex-oogan labada dal, xilli ay toddobaadyadii dhowaa jireen xoogaa isu soo dhowaasho ah.